विश्वास राख्न किन यत्ति गाह्रो छ: मार्टिन भ्रिजल्याण्ड
किन विश्वास राख्न यत्ति गाह्रो छ
मा दायर समाचार विश्लेषण	by मार्टिन भिजल्याण्ड	3 अगस्ट 2019 मा	• 8 टिप्पणिहरु
हामी सबैको जीवनमा चरणहरू छन् जहाँ सबै कुरा हाम्रो विरुद्धमा छ वा हामी कुनै बाटो देख्दैनौं। तपाईं त्यस समयको लागि चाहानुहुन्छ जब सबैले काम गर्दछ वा अरूलाई हेर्छ र तपाईंले देख्नुहुन्छ कि सबै ठीकठाक हुन्छ। विशेष गरी जब तपाईं केही हदसम्म गलत वास्तविकतामा ब्यूँझनुहुन्छ जुन मानवता आयोजित छ, यो निराश हुन सक्छ। कसैसँग आफुलाई सकरात्मक बनाउने युक्तिहरू हुन्छन्, अरूले चीजलाई उत्साह दिन संक्षिप्त आवेगमा भाग्छन्। एकचोटि तपाईंले बुझ्नुभयो कि हाम्रो वास्तविकता कसरी संरचना गरिएको छ, तपाईं चीजहरूलाई बिभिन्न परिप्रेक्षमा राख्न सक्नुहुन्छ र सबै समस्याहरूको समाधान कसरी फेला पार्ने भनेर पनि तपाईंलाई थाहा छ। यो धेरै सरल छ, तर यसलाई जीवनमा तपाईंको दृष्टिकोणमा पूर्ण परिवर्तन चाहिन्छ। यद्यपि यसले कुनै मेहनत लिदैन, तर सबै प्रयासहरू टाढा लैजान्छ।
त्यहाँ व्यक्तिहरू छन् जुन विश्वास गर्छन् कि उनीहरू नकारात्मक उर्जा वा प्रेतहरू द्वारा सताइदैछन्। उदाहरण को लागी, तपाई यसलाई अनुष्ठान वा शमन मार्फत टाढा पठाउन सक्नुहुनेछ। अर्कोले विश्वास र विश्वासमा समाधान खोज्दछ जुन माथिबाट मद्दतमा विश्वास गर्दछ; जबसम्म तपाईं परमेश्वरसँगको आफ्नो सम्बन्धको लागि पर्याप्त नजिक रहनुहुन्छ।
केवल जब तपाईं पूर्ण रूपमा बुझ्नुहुन्छ कि यहाँ वर्णन गरिएको सिमुलेसन मोडेल कुनै सिद्धान्त वा इमेजरी होइन, तर वैज्ञानिक तवरले समर्थन गरिएको तथ्य हो, के यी सबै घटनाहरू वर्णन गर्न थाल्छन्।
मामला केवल जब अस्तित्वमा देखा पर्दछ। त्यो के हो 'डबल स्लिट' प्रयोग भ्यान निल्स् बोहर। जो कोहीले पनि यसबाट अलग कहानी बनाउँदछ उसले त्यसो गर्छ किनभने त्यसले ती अनौठो घटनाको अर्थ लिन सक्दैन वा स्वीकार गर्दैन। मामला मात्र अवलोकन मा भौतिकीकरण गर्दछ। त्यतिन्जेल, यसले कम्पन जस्तो कार्य गर्दछ। म कल गर्न चाहान्छु कि एक 'सूचना प्रवाह'। यसमा ज्ञात हुनु भन्दा पहिले कुनै पनि फार्म लिन सक्दछ। 'सबै सम्भावित विकल्पहरू' को रूपमा त्यस जानकारीमा निहित प्रत्येक फारम समावेश छ। क्वान्टम फिजिक्समा यसलाई 'सुपरपोजिसन' भनिन्छ। पहिलो अवलोकनले सुनिश्चित गर्दछ कि 'सबै सम्भावनाहरूको डाटा' त्यो एक अवलोकनमा परिणत हुन्छ।
त्यो 'सुपरपोजिसन' एक प्रकारको स्रोत कोड देखिन्छ, किनभने प्लेस्टेशन गेमको सोर्स कोड पहिले नै सीडीमा जलाइएको छ र प्लेयरको इनपुटबाट स्क्रिनमा मात्र अनुवाद गरिएको छ।
त्यसैले यो अवलोकन नगरेसम्म कुराको अस्तित्व हुँदैन। "खैर, त्यसो भए तपाई साँच्चै विश्वास गर्ने मोटो साजिश विचारक हुनुपर्दछ", तपाइँ अब सोच्न सक्नुहुन्छ। होइन, त्यो केवल कठिन विज्ञान हो। त्यसकारण यो विश्वास होइन, तर प्रयोगको परिणाम हो जुन सयौं पटक दोहोरिएको छ र त्यसले अल्बर्ट आइन्स्टाइनलाई पनि पूर्ण हिलायो।
मूर्तको रूपमा हामीले छोइरहेका र देख्न सक्ने सबै चीजहरू केवल त्यहाँ अवलोकन गर्दछ जब त्यहाँ एक दर्शक हुन्छ। यसको मतलब यो हो कि हाम्रो शरीर र त्यस शरीरसँग सम्बन्धित मस्तिष्क पनि बोधको परिणामको रूपमा मात्र भौतिक हुन्छ। त्यसोभए यो हाम्रो दिमाग वा हाम्रो विचारहरू होइनन्। त्यहाँ बाह्य अवलोकनकर्ता हुनुपर्दछ। बाह्य 'यस अनुकरण बाहिर' को अर्थमा। होईन, कुनै एलियन छैन। हामी वास्तवमै 'हाम्रो भौतिक ब्रह्माण्ड बाहिर' को कुरा गर्दैछौं। यसलाई निम्नसँग तुलना गर्न उत्तम हुन्छ: तपाईंको प्लेस्टेशन खेलको स्क्रिनमा अवतार वा कठपुतलीलाई कुनै पक्का ज्ञान छैन कि त्यहाँ खेल बाहिर विश्व छ। यस ब्रह्माण्डका बाह्य पर्यवेक्षकहरू यस पर्दा बाहिर छन्।
यस बाह्य पर्यवेक्षकका लागि सबैभन्दा प्रख्यात शब्दलाई धर्महरूमा "आत्मा" भनिएको छ। सुविधाको खातिर, हामी सर्त लिन्छौं र बताउँदछौं कि आत्मा अनुभव गर्ने खेलाडीसँग वायरलेस जडान हो। पर्यवेक्षक खेलाडीहरूले यो सुनिश्चित गर्छन् कि स्रोत कोड छनौटहरूको परिणामको रूपमा परिणाम स्वरूप। थप रूपमा, यो दिमागमा राख्नु महत्वपूर्ण छ कि त्यहाँ केहि कारकहरू छन् जुन निर्धारण गर्छ के निश्चित गर्दछ, जस्तै मल्टिप्लेयर अनलाइन खेलमा सबै प्रकारका कारकहरू हुन्छन् जसले पर्दामा रहेको कुरालाई प्रभाव पार्छन्। पहिलो, यो खेलको स्रोत कोड हो जुन फ्रेमवर्क सेट गर्दछ। दोस्रो, खेलमा अन्य खेलाडीहरू छन् जसले सबै प्रकारका छनौटहरू र आन्दोलनहरू गर्छन्। तेस्रो, तपाइँ अझै पनी खेल संग सम्बन्धित गैर खेल चरित्र संग व्यवहार गर्दै हुन सक्छ कि खेल मा एक भूमिका खेल्ने र यस्तै।
यो अवधारणा बुझ्न को लागि सक्षम हुन - कि आत्मा पर्यवेक्षक (एक मल्टिप्लेयर खेलमा) संग वायरलेस जडान हो - तपाईंले सर्वप्रथम बुझ्नुपर्दछ कि डबल स्लिट प्रयोगले प्रमाणित गर्छ कि त्यो कुरा अवस्थित छैन भने अवस्थित छैन। तपाईं र म, यो पृथ्वी, तपाईं बसिरहेको कुर्सी, तपाईं बस्ने ब्रह्माण्ड; यो सबै अवस्थित छैन यदि यो ज्ञात छैन। जस्तो प्लेस्टेशन खेल अवस्थित छैन यदि तपाईं स्क्रिनमा हेर्नुहुन्न र बाहिर हिंड्ने वा प्लेस्टेशन बन्द गर्नुभएन भने। अझै सबै कोड पहिले नै CD मा जलाइएको छ। र एक अनलाइन मल्टिप्लेयर खेलको साथ, सम्पूर्ण कार्यक्रम केन्द्रीय सर्भरमा क्लाउडमा पहिले नै छ। अझै सम्म तपाईं देख्नुहुने छैन यदि तपाईं खेल खोल्नुहुन्न। यसको लागि तपाईंले आफ्नो स्क्रिन खोल्नुहोस् र नियन्त्रणकर्ता (जोइस्टिक) समात्नुहोस् र खेल सुरु गर्नुहोस्। त्यसो भएपछि तपाईंको स्क्रिनमा केहि देखिने छ। जे होस्, कोड यस समयमा केन्द्रीय सर्भरमा रहेको छ; तपाईले नदेखे पनि। यद्यपि यो तपाईंको स्क्रिनमा मात्र बृद्धि हुन्छ जब तपाईंको स्क्रीन खुल्दछ र यसमा हेर्दछ। यो वास्तविकता केवल तब परिणत हुन्छ जब हामी यसलाई देख्छौं। यदि तपाईले देख्नुभयो कि अवलोकनकर्ता "चेतनाको तपाईको मौलिक रूप" हो र त्यो कोड क्लाउडमा कतै छ भने, त्यसपछि तपाईले बिस्तारै अवधारणालाई बुझ्नुहुनेछ। उदाहरणको लागि मैले फेरि वर्णन गरे यो लेख.
एकचोटि तपाईंले बुझ्नुभयो कि सिमुलेसन भित्र फेरि उही चाल गर्न पनि सम्भव छ; त्यो हो, निश्चित गर्नुहोस् कि 'खेलमा अवतारहरू' त्यो खेल पुनर्विकास प्रविधि भित्र जुन उनीहरूले एक अनुरुप वास्तविकता सिर्जना गर्न सक्दछन्, तब तपाईं बुझ्नुहुनेछ कि आयामहरू कसरी निर्माण गरिन्छ। म गम्भीरतापूर्वक सिफारिस गर्दछु यो लेख त्यस प्रस well्गमा राम्रोसँग पढ्नुहोस्, तर सारांशमा तपाईं भन्न सक्नुहुन्छ कि आयामहरू सिमुलेसनमा सिमुलेसनको परिणाम हो।
यो 'प्रेरणा' को अवधारणा बुझ्नको लागि वास्तवमै आवश्यक छ। यस लेखमा मैले यो व्याख्या गरेँ कि जब हामी यो प्रयोग गर्छौं तब प्रेरणा राम्रोसँग बुझिन्छ एलोन मस्कको न्युरेलिंकबाट मस्तिष्क-क्लाउड इन्टरफेस बस पाउनुहोस् यदि तपाईंको मस्तिष्क पूर्ण अनलाइन छ र तपाईंको सबै संवेदी धारणालाई यसरी उत्प्रेरित गर्न सकिन्छ कि तपाईं सिमुलेशनमा जान सक्नुहुन्छ र पूर्ण रूपमा महसुस गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो कि सबै चीज वास्तविक छ। कल्पना गर्नुहोस् कि तपाईंको दर्शन, गन्ध, सुनुवाई, स्पर्श र स्वाद र गुरुत्वाकर्षण को भावना सीधा तपाईंको दिमागमा उत्तेजित गर्न सकिन्छ। त्यसोभए यदि तपाईंसँग चाँडै नै लाइफेलिक सिमुलेशनको साथ ईलोन मस्कबाट त्यस्तो वायरलेस ब्रेन-इन्टरफेस जडान छ, भने तपाईं सिमुलेशनमा कठपुतलीसँग आफैलाई पूर्ण रूपमा चिन्न सक्नुहुन्छ। तपाईंको मूलसँगको जडान (त्यो व्यक्ति जोसँग न्युरेलिंक मस्तिष्क ईन्टरफेस छ) तपाईंको आत्मा जडानसँग तुलना गर्न सकिन्छ।
In यो लेख मैले हिँड्ने बायो कम्प्युटरको रूपमा हाम्रो मानव शरीर वर्णन गरे (यो भर्चुअल वास्तविकतामा नक्कल चरित्र: तपाईंको अवतार)। यो अवतारको केन्द्रीय प्रोसेसर (हाम्रो मस्तिष्क), कार्य स्मृति (छोटो र लामो अवधि) र "इन्ग्रेनाइज्ड मेमोरी" छ; हाम्रो डीएनए, हार्ड डिस्क जुनमा हाम्रो अवतारको लागि आधारभूत प्रोग्राम जलाइएको छ। DNA को त्यो आधारभूत प्याकेज आधारभूत नियन्त्रण प्रणालीबाट बनेको छ, जसमा DNA मार्फत पुर्खाहरूको प्रोग्रामिंग दिइन्छ। यस नक्कल भित्र, नक्षत्रहरूले हार्ड डिस्कमा भएका गुणहरूको आधारभूत प्याकेज निर्धारित गर्न मद्दत गर्दछ। पीसी विन्डोजमा चल्दछ, एन्ड्रोइडमा एक मोबाइल फोन र आईओएसमा आईफोन। प्रत्येक जैव अवतारले यस सिमुलेशनमा ज्योतिषीय आधारभूत सेटमा आधारित आफ्नो आधारभूत प्याकेज (अपरेटिंग प्रणाली) प्राप्त गरेको छ। यी 12 प्रकारका आधारभूत ड्राइभरहरू हुन्। डीएनए प्रोग्राम गर्न योग्य छ, त्यसकारण जब यस भौतिककृत संसारमा शिशु अवतार जन्मन्छ (सिमुलेशन) अवतारले आधारभूत ज्योतिषीय नियन्त्रण प्रणाली, साथै पूर्वजहरूका DNA प्रोग्रामिंग प्राप्त गर्दछ। बाँकी प्रोग्रामिंग कार्य स्मृति (छोटो र लामो अवधि) मार्फत गरिन्छ र DNA मा जीवनको लागि पनि जलाइन्छ, ताकि यो नयाँ अवतार (प्रजनन) मा अवतारको प्रजननको समयमा पारित हुनेछ।
आधारभूत प्याकेज जुन मानव अवतारले जन्ममा प्राप्त गर्दछ सर्वश्रेष्ठ एउटा एआई कार्यक्रमसँग तुलना गर्न सकिन्छ। यो एक कृत्रिम बौद्धिक (एआई) प्रणाली हो जसमा उच्च-गुणित अंकगणित विचारहरू गर्न सकिन्छ र भावना पनि आधारभूत प्याकेजको हिस्सा हो। हामी यो सिमुलेशनमा साँचो मानव खुफिया अवतारहरू हौं। फेरि: यो अत्यावश्यक छ कि तपाईंले यो वास्तविक हो भनेर हेर्न सिक्नु आवश्यक छ नक्कली वास्तविकता छ होलोग्राम होईन, किनकि त्यो विचार भ्रामक छ। त्यहाँ होलोग्राफिक प्रक्षेपण छैन; यो अधिकतम रूपक हो। धारणा मा पदार्थ को भौतिकीकरणको सिद्धान्त केवल एक भौतिक घटना हो। मामला अवस्थित छैन यदि पर्यवेक्षकले यसलाई बुझेनन्। बहु-खेलाडी सिमुलेशनमा, पदार्थ पहिलो अवलोकनमा सिर्जना हुन्छ (पहिलो खेलाडी जसले यो अवलोकन गर्दछ) र त्यसपछि सदाका लागि भौतिक बनाइन्छ। क्वान्टम फाँसीको सिद्धान्त यसको लागि आवश्यक छ र हामी देख्यौं उही आधारभूत सिद्धान्तहरू गुगलको क्लाउड प्लेटफर्ममा संवर्धित र भर्चुअल वास्तविकताका लागि लागू गरियो (हेर्नुहोस्। यहाँ)। आधारभूत एआई प्याकेज जुन मानव अवतारको डिएनए मा "जलाइएको" छ (आधारभूत एआई अपरेटि system प्रणाली) हो, जस्तो कि हो, मानव व्यक्तिको अहंकार वा चरित्र।
एक व्यक्ति चिन्ता, उदासिनता, आनन्द, उत्साह, उदासिनता, साइकोसेज, र अन्यबाट पीडित हुन सक्छ। थप रूपमा, एक व्यक्तिले सूचित निर्णयहरू गर्न सक्दछ, अध्ययन (युक्तिहरू सिक्नुहोस्) र सम्झन, सुधार गर्न, र यस्तै अन्य। हामी एक सुपर यथार्थवादी सिमुलेशनमा एक सुपर एआई अवतार हौं।
हामी सबैले गर्ने ठूलो गल्ती यो हो कि हामी अवतारलाई खेलमा सबै निर्णयहरू दिन दिनेछौं। हामी बिर्सिसकेका छौं कि हामी बाह्य खेलाडी / पर्यवेक्षक हौं र त्यसैले हामी यो सोच्दछौं कि हामीले यसलाई आफ्नो बायो-प्रोसेसर (हाम्रो मस्तिष्क) को सोचसँगै गर्नुपर्दछ र सबै निर्णयहरू हाम्रो प्रशिक्षित एआई कार्यक्रममा छोड्नुहोस् (अहंकार, चरित्र, बुद्धिमत्ता) । हामी योजनाहरू बनाउँछौं, राम्रो शिल्पकलामा आफैलाई तालिम दिन्छौं र सोच्छौं कि हामी त्यहाँ कडा परिश्रम र क्यारियरको माध्यमबाट प्राप्त गर्नेछौं। हामी दृढ विश्वास गर्छौं कि हामी (उनको मस्तिष्कको साथ मानव अवतार) सँग सब भन्दा राम्रो अवलोकन र सब भन्दा अनुभव छ। हामीले के बिर्सेका छौं कि त्यहाँ यस अवतारको बटनहरूमा कोही छ जसको अझ राम्रो सिंहावलोकन छ। हामी हाम्रो मूल (यसैले 'प्रेरणा' को रूपमा पनि चिनिन्छ) संग यो वायरलेस जडानमा कुनै ध्यान दिएनौं। "त्यो सबै राम्रो र राम्रो छ, तर त्यो सबै आध्यात्मिक झुण्ड हो, जसले मलाई अब मद्दत गर्दैनतपाईं सोच्न सक्नुहुन्छ। यसको साथ हामीले वास्तवमै एक व्यक्तिलाई राख्यौं जुनसँग उत्कृष्ट ओभरभ्यू (बाह्य अवलोकनकर्ता, प्लेयर, व्यक्ति जुन तपाईं वास्तवमा हुनुहुन्छ) किनारमा राखिएको छ। हामी खेलमा हाम्रो एआई कार्यक्रम सुन्छौं र ओभरभ्यू भएकाहरूलाई होइन।
त्यहाँ एक मात्र सही तरीका यो अनुकरण को माध्यम बाट जाने छ र त्यो हो: नेतृत्व गर्न बटनमा एक। व्यक्तिसँग बढी अवलोकन छ र हाम्रो एआई प्रोग्राम (हाम्रो प्रोग्रामिंगको आधारभूत सेट र हाम्रो अवतार मस्तिष्क कोषहरू यस सिमुलेशनमा हाम्रो सहभागिताको क्रममा हुने प्रोग्रामिंगको आधारभूत सेट) पार गर्न सक्षम छ। त्यो गाह्रो छ, किनकि हाम्रो अवतार प्राय: स .्घर्ष गर्दछ। भावना, डर, पीडा, उत्साह; ती सबै आधारभूत कार्यक्रमहरू बाहिर लिने र नियन्त्रण गर्ने अस्वीकार गर्न सक्दछन्। तर यो एकमात्र सही इनपुट हो जुन हामीले पछ्याउन सिक्नुपर्दछ। हाम्रो चेतनाको मूल रूपसँग सधैं उत्तम अवलोकन हुन्छ; 'हेलिकप्टर शीर्ष दृश्य' भएको छ।
बाहिरी खेलाडी सुन्न सिक्नको लागि छनौट गर्नको लागि यो सबैभन्दा अप्राकृतिक (हाम्रो एआई कार्यक्रमको बिरूद्ध) छनौट हो। तपाईं यो प्रश्न पनि सोध्न सक्नुहुन्छ:तपाईं त्यो कसरी गर्नुहुन्छ?उत्तर वास्तवमा धेरै सरल छ। तपाईले गर्नु पर्छ अझै चुप लाग्नु, तपाइँको एआई प्रोग्रामिंग पहिचान गर्नुहोस् र सुन्नुहोस् तपाइँ को हुन्। तपाईं मानव अवतार हुनुहुन्न जुन तपाईंले ऐनामा हेर्नुहुँदा देख्नुहुन्छ। तपाईं चेतनाको एक रचनात्मक मौलिक रूप हुनुहुन्छ जुन सूचनाको सबै-समाहित (सुपरपोजिसन) प्रवाहबाट उत्पन्न भयो। तपाईं एक रचनात्मक इकाई हुनुहुन्छ जुन सिमुलेशनमा देखा पर्‍यो (सम्भवतः) भाइरस सिमुलेशन).
केवल सही निर्णयहरू यसैले तपाईंको मूल साथ तपाईंको वायरलेस जडानबाट आउँदछन्। यो नियन्त्रण तपाईको बिचार र भावनाहरुबाट स्वतन्त्र हुन्छ, त्यसैले सोच्न र भावनाको आधारमा कम कार्य गर्न सिक्नु महत्त्वपूर्ण छ। फेरी: त्यो अप्राकृतिक हो, किनकि हाम्रो एआई कार्यक्रमले सबै चीजहरूमा विश्लेषण गर्न र प्रतिबिम्बित गर्न चाहन्छ र निर्णय लिन्छ। हामी पनि जान्न चाहन्छौं कि यसले 'राम्रो लाग्छ'। जे होस्, हामी केलाई बेवास्ता गर्दछौं कि निर्णय यो पहिले नै यसबारे सोच्नु अघि वा यस बारेमा भावनात्मक हुनु अघि नै गरिएको थियो। त्यसैले चिन्ता गर्न रोक्नुहोस्: उत्तम सिंहावलोकन भएको व्यक्तिले पहिले नै निर्णय लिइसकेको छ (तपाईंको वास्तविक स्व)।
3 अगस्ट 2019 मा 17: 27
यदि तपाईं आफ्नो अन्तर्ज्ञान पालन गर्नुहुन्छ, त्यो हो, तपाईंको उच्च भावना, समानुपातिक भावनाको साथ भ्रमित हुनु हुँदैन, त्यसो भए यो सुन्नु राम्रो हुन्छ, मलाई लाग्छ। किनभने तपाईंको उच्च स्वयंले त्यो निर्णय गरिसकेको छ। त्यसोभए "सोच र भावनाबाट कम कार्य गर्न" मेरो विचारमा "" सोच (अहंकार) बाट कम कार्य गर्नुपर्दछ, तर सहजै भावनाबाट बढी "। यद्यपि भेदभाव गर्न अक्सर गाह्रो हुन्छ। उदाहरणको लागि, मैले एक तथाकथित आध्यात्मिक व्यक्ति अनुभव गरें, जसले कसैको सुन्दर आत्मा रेखाचित्र बनाउन सक्थ्यो, तर उनको क्यान्सरमा चेमोको साथ उपचार गर्न चाहान्थ्यो, किनकि "त्यो राम्रो लाग्यो"। र एसिड (चेमो) ले अनुमान गरी अम्लता (कम अक्सीजनको साथ अम्लीय वातावरण) लाई क्यान्सर जस्ता विरुद्ध सहयोग गर्दछ, जुन कुनै पनि हिसाबले स्पष्ट हुँदैन। म उनको डर महसुस गरे।
3 अगस्ट 2019 मा 18: 37
सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको यो नक्कल वास्तविकतासँग आफूलाई पहिचान गर्नु हो र यो सोच्नु हो कि एक्लै सोच्न को लागी यो सिमुलेसनको अतिरिक्त फरक समयरेखा संग अनगिनत (समानान्तर) सिमुलेशन चलिरहेको छ। समयको अवधारणाको उल्लेख गर्न होइन ... अचेत जनले अब 'वास्तविकता' को अर्को विस्तारलाई नियन्त्रण गर्न व्यसन प्रविधि प्रयोग गर्दछ, तथाकथित बढ्दो वास्तविकता, जुन भौतिक कार्यान्वयनको पोर्टल हो र यस सिमुलेशनको असीम अनुभव हो।
हामी ज्वारलाई मोड्न सक्दछौं यदि केहि निश्चित संख्याले यस सुरक्षा नेटको बारे सचेत गरायो भने, म सहि संख्याको बारेमा निश्चित छैन। तर यदि मानवताले व्यवहार नगर्न र गैर-अनुपालनको अवधारणामा कार्य गर्न थाल्छ भने, यसले एक प्रकारको डोमिनो प्रभाव पार्दछ जुन प्रभावमा आउँदछ ताकि हामी टेक्नोलोजीलाई होइन तर टेक्नोलोजीलाई नियन्त्रणमा राख्न जारी राख्यौं।
3 अगस्ट 2019 मा 18: 53
भर्चुअल जानवरलाई अनफ्लग नगर्नुहोस्
3 अगस्ट 2019 मा 20: 00
42: 25 "एक सिमुलेशनमा सिमुलेशन", वास्तवमा यही हो जुन उनीहरू अहिले कडा मिहिनेत गर्दै छन् र ब्यान्डविथ समस्या निकट भविष्यमा समाधान हुनेछ।
3 अगस्ट 2019 मा 20: 01
डबल स्लिट्स प्रयोगले देखायो कि 'पदार्थ' अवलोकन मात्र गठन हुन्छ। सबै कुरा सम्भव छ यो धारणा सम्म। यद्यपि यो बहिष्कार गर्न सकिदैन कि हामी धारणाका माध्यमबाट 'materir' हेर्नका लागि प्रोग्राम गरिएका छौं। हामी कसलाई भेट्टाउन प्रोग्राम गरिएको छ कठिन छ।
कसले भन्दैन कि हाम्रो चेतना / धारणा मार्फत 'पदार्थ' को अनुभव पनि एक नक्कल हो।
मलाई थाहा छैन यो भनिन्छ कि हामी बुझ्छौं, तर त्यहाँ तथ्यको कुनै उल्लेख छैन यदि यदि हामीले बुझ्यौं भने, 'ज्ञात' ले पनि हामीलाई बुझ्छ। दुई-तर्फी ट्राफिक हामीलाई मात्र अवलोकन गर्नुको सट्टा? के अवलोकनको चेतना हुन्छ ?, आत्मा?
3 अगस्ट 2019 मा 21: 08
त्यो मलाई असम्भव देखिन्छ र अव्यावहारिक जस्तो छैन। त्यसो भए, यो खेलको अवतारले "सोफेमा खेलाडी" देख्न सक्दछ। बहिष्कार गरिएको देखिन्छ।
3 अगस्ट 2019 मा 21: 47
हामी सोफेमा प्लेयर देख्न सक्दैनौं। मेरो भन्नुको मतलब यो हो कि हामीले यस आयाममा के बुझ्छौं, उदाहरणका लागि निर्जीव पदार्थले पनि हामीलाई देख्न र प्रभाव पार्न सक्छ र हामी यसलाई बुझ्न वा मापन गर्न सक्दैनौं। दुई-बाटो ट्राफिक? शायद म धेरै सोच्दछु।
9 अगस्ट 2019 मा 08: 11
एआई: अस्तित्वको लागि लडाई
संसारमा आधारित फिल्म जहाँ एकलताको नजिक एएनए को विकासको नजिक छ, एक प्रबन्ध सफ्टवेयर, उत्पादकता वृद्धि गर्न प्रयोग। सेनाले भविष्य कार निर्माण कारखानामा एक मात्र कामदारलाई पछ्याउँदछ, किनकि एएनएले उनलाई पूर्ण नियन्त्रणमा राख्छ।
एक एआई कार्यक्रमले यो जोखिममा छ वा बन्द हुँदैछ भनेर जान्छ, यसले कसरी प्रतिक्रिया दिनेछ?
आश्चर्यचकित तकनीक तपाईलाई वास्तविक समयमा CGI वर्णको भित्र पार्छ।
तिनीहरूका आँसुहरू उनीहरूको चश्मा भर्दै छन् ... अभिव्यक्ति छैन अभिव्यक्ति
« किन मानिसजातिको एआईको साथ अमरत्व र फ्यूजन प्राप्त गर्न लोभ्याइएको छ
पदोन्नति: मार्टिन Vrijland संग छुट्टी मा नि: शुल्क »
कुल भ्रमण: 4.178.926